Okwamanje, idivayisi ezifana GPS-Itilosi, wasebenzisa yonke indawo, futhi kabusha ukuhlola inzuzo yayo kunzima. Nga le gajethi, bedukile ezindaweni eziqhelile kube nzima. Navigator isibe buyindlela esisemqoka zabantu abaningi ehamba ngemoto hhayi kuphela.
Phakathi amafemu yesimanje esikhiqiza amatilosi, le Garmin - omunye edume kunazo zonke. Kutholwe ngo-1989 inkampani uye baphumelele omkhulu ensimini yayo futhi liyaqhubeka lijabulisa amakhasimende imikhiqizo izinga emakethe imishini navigation. Garmin, ngaphezu GPS-amatilosi, ukhiqiza video, amawashi, imishini ngebhayisikili ngisho ezihlukahlukene izesekeli lokuthumela. With ezahlukene imikhiqizo, inkampani ngokuqinile ophethe isikhundla salo emakethe.
Ngokuhamba kwesikhathi, noma yimuphi umsebenzisi we-GPS-Itilosi esamangele indlela yokubuyekeza ibalazwe phezu Garmin itilosi. Amadolobha amaningi manje ngenkuthalo ngaphansi ekwakhiweni kwezakhiwo ezintsha, imigwaqo emisha abekwa, emigwaqweni amadala angethula isiqondisi i-WinSock. Ngenxa yakho konke lezi zici, ulwazi, lokubonakala kudivayisi yakho kungenzeka ukuthi kakade asihlobene. Ngakho nanku umbuzo, indlela yokubuyekeza amamephu ku itilosi Garmin, ekujabulisayo abasebenzisi eziningi le gajethi.
Download amakhadi amasha ngangokunokwenzeka nge umthombo esemthethweni (lokhu izobiza ethile), futhi mahhala. Lesi sihloko sizodingida kokubili izindlela. Iyiphi kunenzuzo ngokwengeziwe umsebenzisi ukunquma. Okokuqala nje, indlela yokubuyekeza amabalazwe ku-Garmin Nuvi Itilosi 50.
Download amabalazwe kusukela olusemthethweni umthombo Itilosi iqinisekisa ukuvikelwa third-party yokufaka isofthiwe ezingalimaza kudivayisi yakho. Lena indlela ephephe kunazo. Ngakho, indlela yokubuyekeza kumephu itilosi Garmin?
Ukuqala ifayela izibuyekezo kumele ithengwe. Ungathenga isibuyekezo yesikhathi esisodwa, noma ukhokhe njalo Ukuvuselela amabalazwe lonke sonke isikhathi sokusebenza kwedivayisi. Ungase futhi ukuthenga amakhadi kuphela kulezo zindawo ukuthi sezivele elifakwe Navigator.
Ngaphezu kwalokho, isidingo ukuxhuma idivayisi usebenzisa i-USB ikhebula (kumele ifake).
Dala i-akhawunti kwi website esemthethweni futhi angena kuwo.
Udinga ukuya "Amamephu Wami", kuyoba bhala yonke amabalazwe iyatholakala. Ungase futhi ukuthenga ezinye ibalazwe ezifundeni kwi website esemthethweni (isibonelo, ibalazwe eNyakatho neMelika izobiza $ 70).
Khetha "ibalazwe muva atholwe" model yakho isiphequluli ohlwini idivayisi.
Okulandelayo, udinga ukufaka i-Garmin Khuluma ukuvumelanisa nge uhlelo kukhompyutha. Kuyaphawuleka ukuthi awukwazi ukufaka isofthiwe, uma usebenzisa i-Google Chrome. Sebenzisa isiphequluli esihlukile.
Ngemva kwalokho, uma ucelwa ukuba ufake Garmin Express. Uma lokhu kungenzeki, udinga ukulanda futhi uyifake. Leli thuluzi kuwuthinta ngqo itilosi.
Qedela ukubhaliswa elula ukuba ube ohlelweni oluthile olumisiwe.
I-Garmin Express, khetha u- "Buyekeza" ithebhu. Uma ulapho ungabona zonke izibuyekezo etholakalayo kudivayisi yakho.
Ukuchofoza inkinobho "Yokuxhumana", ungakwazi ukufaka isibuyekezo.
Izibuyekezo ezizolandwa. Emva thwebula udinga uqalise idivayisi futhi ukuyikhipha-USB ikhebula kusuka kukhompyutha.
Kulesi update ubanikeza okuvela komunye umthombo olusemthethweni igcwaliswe. Njengoba ubona, ke ilula. Ngokulandelako, cabangela indlela yokubuyekeza amamephu ku itilosi Garmin Nuvi 1410. umehluko akuphazamisi e imodeli ku inqubo samanje.
Ukuqala kusuka wangaphandle
Ngaphambi ukulanda amabalazwe ezivela emithonjeni olungekho emthethweni kufanele uqaphele ukuthi umenzi akuyena obangela isofthiwe efakwe akuyona indawo esemthethweni. Uma ngokungazelelwe kuzoba ukwehluleka Navigator, ngaphansi isiqinisekiso ngeke zamukelwe. Ngakho-ke, zonke amafayela alandiwe kumele ngokucophelela bese zihlolisiswa izinhlelo unqulo wesi arab kuphela.
Kungcono ukusebenzisa izingosi amakhadi evulekile. Lokhu amafayela khulula etholakalayo wonke umuntu. Abakwazi kalula amazwe kudivayisi. Kulawa masayithi ungathola amabalazwe ezindaweni ezahlukene. Khetha indawo oyifunayo futhi uyilandele kukhompyutha yakho.
Xhuma idivayisi kwikhompyutha yakho ngokusebenzisa i-USB ikhebula oza kit. Uma zivulwa ngokuzenzakalelayo Garmin Express, uvale ohlelweni lwethu, ngeke iphazamise ikhadi.
Uma ixhunyiwe, GPS-Itilosi kumele iqale ukusebenza hard drive mode. Uma kungaqali, uwubeke kule modi ngokuzenzakalelayo izilungiselelo zamagajethi.
Faka itilosi isistimu yefayela.
Faka kumephu ifolda. Uma ingekho - dala.
Kopisha le kulayishiwe kusuka website ifayela ibalazwe khulula kumephu (emva kokuhlola fayela ngezifo).
Lapho beqeda thwebula, uqale kabusha isiphequluli.
Ngemva kwalokho, kufanele uvumele itilosi, ukhethe izilungiselelo ukulanda ibalazwe, ukushintsha lona ubudala.
Ngakho, umbuzo indlela yokubuyekeza amamephu ku itilosi Garmin Nuvi usebenzisa umthombo olungekho emthethweni, ixazululwe.
Indlela ukuvuselela amabalazwe Navigator Garmin Nuvi 1310 futhi 1300: Firmware Update
Lapho ufaka amabalazwe amasha ku Nuvi GPS-amatilosi 1300 futhi 1310 onobuhle angangakwazi abanye. Bayoba ezocatshangelwa kulesi sigaba. Ngaphandle umbuzo indlela yokubuyekeza amamephu ku itilosi Garmin Nuvi 1300 futhi 1310, abasebenzisi abaningi baye babika izinkinga firmware ngemuva kokufaka ikhadi elisha. Navigator ungaqala ukusebenza kancane. Flashing kudivayisi ukuzixazulula lezi zinkinga. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi noma usebenzise uhlelo WebUpdater, noma uthinte isikhungo Ochwepheshe inkonzo. Ungase futhi enze kabusha uHlelo ngokwakho. Chaza kafushane indlela yokukwenza.
Njengoba kunqunywa inani ukuhlonza kudivayisi, kubalulekile ukulanda firmware elifanele (kusukela website esemthethweni).
Fometha imemori khadi (firmware is arcade kwenziwa kuyo) bese udala kulo Garmin ifolda.
Kulesi folda, ukulondoloza ifayela, ekuqambeni kabusha ke gupdate.gcd.
Kulesi firmware kudivayisi usuphothuliwe, uma ikhona nobunzima okwengeziwe, kungcono ukuxhumana maphakathi sesevisi usizo kumuntu ofanelekayo.
Nanka amathiphu ambalwa ezokwenza usebenzisa GPS-Itilosi kujabulise kakhudlwana:
One-time ukulanda buyekeza imephu kusuka website esemthethweni, zingakapheli izinsuku ezingamashumi amathathu, ungalanda omunye buyekeza, uma kubonakala kulesi sikhathi.
Ukuze isikhathi ekuphileni zedivayisi, ungashiyi ke elangeni ngokungadingekile.
Ibuyekeza firmware, qiniseka ukufunda Izibuyekezo ngakho. Ezinye izinhlelo engalimaza GPS-Itilosi.
Nguliphi likhadi kungcono ukukhetha?
Uchaza indlela yokubuyekeza imephu itilosi Garmin, sekuyisikhathi ukunquma ukuthi iyiphi kungcono: ukulanda ibalazwe kusukela website esemthethweni noma imithombo wesithathu? Ukhetha ukhetho lokuqala, ukhokhela okulandwayo ephephile, ebe egcina iwaranti umkhiqizo wakho. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka khona inyanga eyodwa ukuze ukulanda elinye update. Ukuthenga ukuphila update esizeni esemthethweni, ukhokha kanye, njalo uthole izibuyekezo okusha emabalazweni.
Ukulanda kusuka ku isisetshenziswa amakhadi third-party, wena adalule idivayisi iphinde isiqinisekiso singasebenzi izingozi, kodwa musa akhokhe imali (isilinganiso $ 70) ukubuyekeza amabalazwe. Ngaphezu kwalokho, abaningi amasayithi khulula, wonke amafayela bangenile Antivirus. Ukuze ufunde indlela yokubuyekeza amamephu ku itilosi Garmin, oluchazwe ngenhla. Impela, nge khulula thwebula indawo kakhulu kuzuzisa ngokwengeziwe umsebenzisi, ngoba ezinye amakhadi ku izinsiza olusemthethweni kungaba Itilosi ezibizayo!
Ukuthenga GPS-Itilosi lula Ukuphila kwanoma imuphi umuntu. Njengoba kunzima kakhulu ukuba ulahleke, kungakhathaliseki lapho ukhona. Nokho, ukuze uthenge, ngaso sonke isikhathi ubonisa ulwazi lwamanje, kubalulekile ukuba ubuyekeze amabalazwe njalo ukulandwa. Ukuze uthole ukwaziswa mayelana nendlela kabusha imephu ku Itilosi Garmin, wachaza ngokuningiliziwe esihlokweni. Ungakhetha noma ukuthuthukiswa ikhokhwe (kwi website esemthethweni), futhi inguqulo khulula ngosizo amasayithi amakhadi evulekile nezinye izinto ezifanayo. Ngaphezu ekubuyekezeni amabalazwe, itilosi kwesinye isikhathi adinga update firmware, okungase kwenziwe ngosizo ochwepheshe, kanye siqu sakhe.
William Saroyan: Biography, lokusungula nezithombe